Usolwa ngokudla imali yabantu uKhuzani Mpungose | News24
Usolwa ngokudla imali yabantu uKhuzani Mpungose
Durban - Ushiye angalazi kuKhuzani "iNdlamlenze" Mpungose umdlali wesigingci, uSenzo Khanyile oshiye phansi ukusebenza nalesi silomo sikamasikandi ngoba ekhala ngokungakhokhelwa ngendlela egculisayo.
Ngokuthola kweLANGA, njengoba uKhuzani esesitudiyo elungiselela i-albhamu ezophuma ngePhasika, kuze kwalandwa uMbuzeni Mkhize ukuba ayodlala ezinye izingoma sekupataniswa, wahluleka wancama ukudlala ushuni waleli ciko.
"USenzo ukhala ngokuthi uKhuzani uyidla yedwa imali yomsebenzi, uyaphumelela kodwa bona kabanalutho oluphathekayo yize besebenza naye. Ngikhuluma nawe nje useqophe ne-albhamu yakhe kodwa uKhuzani ubefihlelwe ngayo ngenxa yomona wokuthi uzicebisa yedwa," kusho umthombo.
OLUNYE UDABA: Igcokama ligadle kwimbangi
Uthi kunemibiko ethi iNdodakazi yeNtandane - engumculi kamaskandi - yiyona enesandla kule nto, ibitshela uSenzo ukuthi makazimele ngoba uKhuzani udlala ngaye.
"Lo muntu uhambile nyakenye eyoshayela iNdodakazi yeNtandane isigingci, ubesehlala kubo kwayo. Kuqale lapho ukuthi angazwani kahle noKhuzani," kusho umthombo.
Ngokomthombo, uSenzo ubhalele uKhuzani imiqhafazo ebuza ukuthi kanti unembeza wakhe kawusadeli yini ngokudla imali yabo. Kule miqhafazo uveze nokuthi kusukela ngowezi-2011 kudlalwa ngaye, usebenzela ize yena akanalutho uyahlupheka ngenxa yalo mculi kodwa ubekhipha ikhono lakhe lonke uma edlala isigingci.
Ethintwa uSenzo, uphike walala ngomhlane wathi kayikho ingxabano ekhona phakathi kwakhe noKhuzani nokuthi yena useyekile ukusebenzisana nalo mculi. Uthi uyithola ngendlela egculisayo imali yakhe.
"Izingoma ezizophuma zidlalwe yimina isigingci kwaba yilezo nalezo engingakwazanga ngenxa yokubambeka. Okwe-albhamu yami bengikufihlele wonke umuntu ukuze kuzothuka kwasani uma isiphuma," kusho uSenzo.
ILANGA linayo le miqhafazo. UKhuzani uthi kuyiphutha ukuthi akayikhokhi imali. Utshele ILANGA ukuthi bebenesivumelwano sokuthi bathola imali elinganayo noSenzo etholakale ngokudayisa kwe-albhamu.
"Kangazi lutho ngokucula kwakhe, akaze angitshele lutho engikwaziyo wukuthi akezanga ukuzongidlalela isigingci ngaze ngafuna abanye. Uthe kimina uyasebenza wabe esengithumelela imiyalezo athi kade kwasa ngimxhaphaza ngingamholeli.
"Ngokwazi kwami bengithola imali elinganayo naye ngokuthengisa kwe-albhamu, ngimholela imali yemicimbi ngisho engasebenzanga.
"Ngisola abantu abanomona abangene phakathi kwethu kodwa-ke uyobuya ngelinye ilanga. Okungididayo wukuthi uyangibalekela akafuni sihlale sixoxe. Kwakhona lokho bengenza ubuntu ngoba udlala isigingci kuphela njengoba enza kwabanye," kusho uKhuzani.
INdodakazi yeNtandane ithi kayihlangene nezingxabano zabo. Ithi kuyiqiniso ukuthi nyakenye yacela uSenzo kuKhuzani ukuba ayoyishayela isigingci.